Vaovao - Inona no maha samy hafa ny paty voatabia sy ny ketchup?
Inona no maha samy hafa ny paty voatabia sy ny ketchup?
Rehefa ataontsika lasa tsirony matevina sy fitoviana matevina kokoa ny voatabia voatoto dia fantatra amin'ny hoe paty voatabia io endrika io. Azontsika atao ny mampiasa an'io paty voatabia io amin'ny tsiro isan-karazany sy amin'ny fomba fahandro samihafa. Manome tsiro tena izy amin'ny gumbos, lasopy, laoka, hena nendasina sns.
Ny akora ilaina amin'ny ketchup voatabia dia voatabia aloha ary avy eo vinaingitra, siramamy ary zava-manitra sasany koa. Androany, ny ketchup voatabia dia nanjary ampahany manan-danja amin'ny latabatra fisakafoanana ary manome tsiro tsara indrindra miaraka amin'ireo entana haingana toy ny burger, chips ary pizza.